သမ္မတကြီးထံအကြံပြုအသိပေးစာ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Tuesday, December 11, 2012 အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ရခိုင်အကြမ်းဖက်မူကြီးကို မဆလအစိုးရ၏ ၁၉၈၂ခု နိုင်ငံသားဥပဒေဖြင့်ဖြေရှင်းနေသော အရေးကိစ္စ တင်ပြခြင်း
ရခိုင်တို့ ၏အကြမ်းဖက်မူသည် နိုင်ငံတော်ဒီမိုကရေစီချီတက်ရေးတွင် ဟန့်တားမူပြုသောစိန်ခေါ်မူ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ကို သမ္မတကြီးနှင့် အတူတစ်နိုင်ငံလုံးတန်းတူရင် ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ သမ္မတ ကြီးဖြေရှင်းနည်း ၄သွယ်နှင့် ယခုဖြေရှင်းနေသော မဆလ၏ ၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားပေတံကို ကြည့်လျှင် အကြမ်းဖက်မူအပေါ် မည်သည့်အရေးယူမူများမရှိဘဲ ဒုက္ခသည်စခန်းရောက်နေသော ရိုဟင်ဂျာ၊ ရခိုင် လူမျိုးစု ၂စုမှ ရိုဟင်ဂျာကိုသာ သီးသန့် စီစစ်ခြင်းသည် အကြမ်းဖက်မူကို နိုင်ငံတော် ကဖန်တီး တာလား၊ရိုဟင်ဂျာကဖန်တီးတာလားလို့ သံသယယုံမှားနေပါသည်။
သို့ သော်သမ္မတကြီးမှ လွှတ်တော်သို့ သ၀ဏ်လွှာပို့ ရာတွင်ရခိုင်များက ရိုဟင်ဂျာများ၏ ပိုင်ဆိုင်မူကို လုယူရလိုခြင်းဟူ၍လည်ကောင်း၊ပြီးခဲ့သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရခိုင်များကဥပဒေပါ အဆုံး အဖြတ် များကို မလိုက်နာခြင်း၊ရခိုင်အရေးကြောင့် နိုင်ငံတကာတွင်မျက်နှာပျက်ပြီး အားငယ်နေ ရခြင်း စသည်ဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်ကို တွေ့ ရပါသည်။
တဖန်နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်း တစ်ဖက်တွင် ရခိုင်ဟူသောအမည်ကိုတန်ဖိုးထားပြီး 12-8-2012 တွင်ရခိုင်သူပုန်များသည် ကျောက်တော်သို့ဝင်လာပြီး14-8-2012တွင်ရခိုင်သမ္မတနိုင်ငံ ကြေငြာရေးစီ မံရာတွင် လုံခြုံရေးတပ်နှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ လာပြီး လက်နက်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီး ခဲ့ကြောင်း
တောင်ကုတ် ၁၀ လောင်းပြိုင်သတ်ဖြတ်ခဲ့သော အရေးနှင့်စုံစမ်းရေးအဖွဲ့မှ ရခိုင် (၃၀)အားဖမ်းဆီးပြီး အမူထင်ရှားလာသောအခါ ၎င်းထဲတွင် RNDP ပါတီဝင်များဖြစ်၍ ထိန်ချန်ထားခြင်း၊
ပြီးခဲ့သောအပတ်တွင် ဘင်္ဂလားရခိုင်သူပုန်မှ ရဲဘော် (၁၈) ဦးက တာလီဘန်သူပုန်ပုံစံဝတ်စား ဆင် ယင်ပြီး မောင်းတောမှတစ်ဆင့် လုံခြုံရေးတပ်အားတိုက်ခိုက်မူတွင် လိုက်လံဖမ်းဆီး၍ စစ်ဆေးသော အ ခါအားလုံးမှာ ရခိုင်သူပုန်သာဖြစ်သည်ကို ထိန်ချန်ထားခြင်း၊
အကြမ်းဖက်မူကို ရခိုင်သူပုန်များနှင့်အတူ RNDP ပါတီဝင်များလည်းပါဝင်ကျူးလွန်မိပါကြောင်း RNDP ပါတီမှ အတွင်းရေးမူးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးမှူးများက စာနယ်ဇင်းများကိုဝန်ခံခဲ့ကြောင်း၊
အကြမ်းဖက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေသော ရိုဟင်ဂျာများအား မဆလအစိုးရ၏ ၁၉၈၂ခု နိုင်ငံသား ဥပဒေဖြင့် တဖက်သက်စစ်ဆေးမူပြု၍ ဖြေရှင်းရေးနည်းဟန်ပြခြင်းစသည်တို့ကို လေ့လာကြည့်သော အခါ နိုင်ငံတော်၏ ဆန္ဒသဘောထားနှင့် မူဝါဒပိုင်း မှာ နိုင်ငံတကာ တွင်တစ်မျိုး၊ ပြည်တွင်းမှာတစ်မျိုး လှည့်စားမူမျိုးဖြစ်နေသလားဟုထင်မြင်ရပါသည်။
ယခုဖြေရှင်းနေသော နည်းလမ်းအရ အကြမ်းဖက်မူတွင် ရခိုင်သူပုန်အား အသုံးချလာသလို အခွင့်ကောင်း ယူပြီး ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်လာမူသည် ရခိုင်တို့၏ စင်ပြိုင်အစိုးရရရှိရေး အတွက် မြန်မာ အခက် ရခိုင်အချက်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးခြင်း၊ ရခိုင်နှင့်ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုများအ ကြားသွေးခွဲအောင် ဖန်တီးခြင်း၊ အကြမ်းဖက်နိုင်အောင်အားပေးခြင်း၊ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများအား ဒုက္ခသည်စခန်းသို့မရောက် ရောက်အောင်ပို့ဆာင်ခြင်းတို့ကိုမည်သူကပါဝင်ပက်သက် ပါသနည်း အဖြေကို သူပုန်မှစပြီး ၀န်ကြီးအဆင့်ထိစစ်ဆေးဖော်ထုတ်အရေးယူရမည်ဖြစ်သည်။
၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေဖြင့်စစ်ဆေးမူပြုရာတွင် နယ်မြေ၌အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွေ ရမည်ဖြစ်သည်။ (က) တစ်ချို့ မှာ မှတ်ပုံတင်လည်းရှိ၊ သန်ခေါင်းစာရင်းလည်းရှိ၊ (ခ) တစ်ချို့ မှာ မှတ်ပုံတင်မရှိ၊ သန်ခေါင်းစားရင်းရှိ(ဂ) တစ်ချို့မှာ မှတ်ပုံတင်လည်းမရှိ၊ သန်ခေါင်းစာရင်း လည်းမရှိဖြစ်နေမည်ကို တွေ့ ရပါမည်။အကြောင်းမှာရိုဟင်ဂျာမှာတိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် ၏ မြန်မာ့အသံနှင့်အသိအမှတ်ပြုစာများရှိပါသည်။ ဤသည်ကို ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုခေတ်တွင် လက်ခံပြီး အာဏာရှင်နေ၀င်းခေတ် 1960-1988 ထိဖြုတ်ချကာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုအား သွေးခွဲအုပ်ချူပ်မူကြောင့် ချန်လှပ်ထားမူဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ပေးသော်လည်း တစ်ချို့ မှာ အဖေက ဘင်္ဂလီ၊ သားက ကမန်၊ မြေးက အိန္ဒိယ၊ တစ်ချို့ အား လုံးဝစာရင်းမတင်ဘဲ ချန်ထားခဲ့မူကို အာဏာ စက်ဖြင့်စီမံခဲ့သည်ကို နာခံယူခဲ့ရပါသည်။ထို့ ပြင်ယနေ့ နိုင်ငံတော်မှ ရိုဟင်ဂျာအသုံးအနှုန်းကို လက် မ ခံနိုင်ကြောင့် ပြောဆို မူသည် အဘယ်ကြောင့်နည်း မေးစရာဖြစ်လာပေသည်။ ရခိုင်ကသူပုန်လား၊ ရိုဟင်ဂျာကသူပုန်လား၊ ရခိုင်ကခိုးဝင်လာတာလား၊ ရိုဟင်ဂျာကခိုးဝင်လာ တာလားဟူသည်မှာ အကြမ်းဖက်မူမှသိရှိနိုင်ပါသည်။ အနောက်သားရခိုင် အ၀ကျွန်းသားရခိုင်ဟု ထင်ရှားသော ဘင်္ဂလား နယ်ဖွား ရခိုင်ခိုးဝင်နေမူကို လူမျိုးတူလျင် သူခိုးလည်းနေနိုင်သည် ဟူသော ၀ါဒသတ်မှတ်ကာ ရိုဟင်ဂျာများအားအတင်းဘင်္ဂလားဟူ၍မှတ်ခေါ်နေသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။
အဆိုပါ အာဏာရှင်အစိုးရ၏ လူမျိုးစုခွဲခြားသော ဆောင်ရွက်ချက်ကို ယနေ့ 2012 တွင် ရခိုင်အကြမ်းဖက်မူကိုအခြေခံ၍ဒုက္ခသည်စခန်း ရောက်နေသောရိုဟင်ဂျာများကိုတစ်ဖက်သက်စစ် တမ်းကောက်ပြီး အထောက်အထားတင်ပြနိုင် သူကို နိုင်ငံသားပြုသို့ စဉ်းစားပြီးမတင်ပြနိုင်သူကို ခိုးဝင်နေထိုင်မူဟူသော လ၀ကဥပဒေဖြင့်အရေးယူ မည်ဟူ၍20-11-2012 နေ့ နယ်စပ် ၀န်ကြီး မှ ပြောဆိုခဲ့မူတွင် ဦးစွာ ယခင် လ၀ကနှင့် အာဏာရှင် တာဝန်ရှိ သူများကို အရေး ယူရ မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုစေ လိုပါသည်။
ယခုတဖန် စစ်ဆေးရာတွင် လူမျိုးစုနေရာတွင် ဘင်္ဂလီဟူ၍ အတင်းရေးသားမူကို လက်ခံရန် အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးသုံးနေပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာသည် ဘင်္ဂလီမဟုတ်ပါ၊ ဘင်္ဂလီသည်လည်း ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်ပါ။ မဆလ ခေတ် နိုင်ငံတော်တွင် နိုင်(၂) ပုံစံတစ်ခါ စစ်ဆေးခံတုန်းက မွတ်စလင်တွေအားလုံး ရိုဟင်ဂျာလို့ ရေးသားမူကို ဖယ်ကာ ရခိုင်ကို သာ လက်ခံပြုခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ နိုင်ငံတော်မှ ရိုဟင်ဂျာများကို စီမံချက်ချပြီး ဘင်္ဂလီ၊ ကမန်၊ အိန္ဒိယစသော လူမျိုးစုအမည်ကို အတင်းပိုင်းခြားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အဖြူကဒ်ပင်အတင်းထုတ်ပေးခြင်းကို နာခံပြီး ယူခဲ့ရပါသည်။ ဤသည်မှာ ဥပဒေလား၊ အာဏာစက်လားဆိုတာ ပိုင်းခြားမြင်လိုပါသည်။
ဤသို့ ဖြစ်စဉ်များကို အခြေခံ၍ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သို ချီတက်ကာလ တွင် ဖောက် ထွင်းဝင် လာသော ရခိုင်အကြမ်းဖက်မူ အပေါ် ဖြေရှင်းရာ တွင် အောက်ပါအရေးများကို ဦးစားပေးဖြေရှင်းစေ လိုပါသည်။ (က) နားလည်မူမရှိ၊ ဥပဒေအဆုံးအဖြတ်နာမခံသော ရခိုင်သူပုန်နှင့် ပါတီကို ချက်ချင်းဖော်ထုတ်အရေးယူရေး၊ (ခ) ဒုက္ခစခန်းအသီးသီးရှိ ပြည်သူများကို အမြန်ဆုံး သူ့ အိမ် သူ့ ယာ သူ့ လုပ်ငန်းသို့ ပြန်လည်နေရာ ချထာပေးရေး၊ (ဂ) ပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်တွင် သံသယ ၀င်နေသော နိုင်ငံသားရေးကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြီး မဆလအစိုးရ၏၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေကို ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှင့် လူ့ အခွင့်အရေး စံနှုန်း ပေါ်မူတည် ၍ ပြုပြင်ဖြည့် စွက် ကာ စစ်ဆေးမူပြုရန်၊
ဤသည်ကို 2013 မ၀င်လာမီ အရေးပေါ်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေဖြင့်စီမံပြီး ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘ၀ တည် ဆောက်နိုင်ရေးကို ကူဖြေရှင်းပေးပါရန် လေးစားစွာ အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။
(National Foundation, BKK)
This entry was posted on December 12, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရိုဟင်ဂျာသက်ကြီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ဆိုင်ကယ်ဖြင့်တိုက်၍ထွက်ပြေးသွား
Singapore turns away rescued boat people →